स्वास्थ्य बिमामा बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा, खातावाल बन्दा लाखौंका स्वास्थ्य बिमा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्पोरेट ∕ स्वास्थ्य बिमामा बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा, खातावाल बन्दा लाखौंका स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बिमामा बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा, खातावाल बन्दा लाखौंका स्वास्थ्य बिमा
रामकुमार पुडासैनी शुक्रबार, २०७६ कात्तिक २२ गते, ११:०० मा प्रकाशित
अहिले बिमा मानिसको रोजाइमा पर्न थालेको थियो । बजारमा अनेकथरि बिमा स्कीमहरु उपलब्ध छन् । बिमा कम्पनीहरुले बिमाका अनेकन स्कीमहरु ग्राहकहरुलाई दिइरहेका छन् । आम मानिसहरुबीच स्वास्थ्य बिमाको विशेष आकर्षण छ ।
स्वास्थ्य बिमाका विभिन्न स्कीमहरु बिमा कम्पनीहरुसँगै नेपालका ठूला भनिएका बाणिज्य बैंकहरुले पनि उपलब्ध गराइरहेका छन् । हेल्थआवाजले बैंकहरुले उपलब्ध गराइरहेका केही स्वास्थ्य बिमाका स्कीमहरु केलाउने प्रयास गरेको छ ।
१. मेगा बैंक
मेगा बैंकमा तलबी खाता भएका खातावालाहरुले ७ लाखको दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमा पाउँछन् । बैंकमा मेगा माया बचत खाता छ भने परिवारका ४ सदस्यले दुर्घटना तथा स्वास्थ्य उपचार बीमा दाबी गर्न पाउँछन् । यो खाता तीन किसिमको छ । १० हजारको जनरल खाता खोलेमा ३० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा, १ लाख स्वास्थ्य उपचार तथा १८ घातक रोगको उपचारका लागि १० लाख रकम पाउँछन् ।
२० हजारको स्ट्याण्डर्ड खाता खोलेमा ४० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा, ५ लाख स्वास्थ्य उपचार तथा १८ घातक रोगको उपचारका लागि २० लाख रकम पाउँछन् । ३० हजारको सुपर खाता खोलेमा १ करोड बराबरको दुर्घटना बीमा, १० लाख स्वास्थ्य उपचार तथा १८ घातक रोगको उपचारका लागि ४० लाख रकम पाउँछन् । यी तिनै किसिमका खातावालाले आफ्नो खातामा भएको रकमको १० गुणा सम्म रकम दाबी गर्न सक्छन् । यो बैंकमा मेगा जीवन साथी बचत खाता र मेगा सर्वप्रिय बचत खाता भएका ग्राहकहरुले भने स्वास्थ्य बीमा बापत क्रमशः ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
२. नविल बैंक
प्रिमियम बचत खाता खालेका सेवाग्राहीका लागि नविल बैंकले अधिकतम ३ लाख स्वास्थ्य उपचार शुल्क उपलब्ध गराउँछ । १३ घातक रोगको उपचारका लागि यो रकम दाबी गर्न पाइन्छ । यसका लागि न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ अनिवार्य खातामा हुनैपर्छ । प्रिमियम खाता खोलेका सेवाग्राहीको मृत्यु भएमा (प्राकृतिक मृत्युसमेत) बैंकले ७५ हजार रकम दिन्छ । न्युनतम ५ हजार खातामा हुनैपर्ने गरी बचत खाता खोलेकाहरुको दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा बैंकले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।
३. नेपाल बैंक
नेपाल बैैंकमा नागरिक बचत खाता खोलेका बचतकर्ताहरुले बैंकबाट बिमा रकम पाउँछन् । त्यसका लागि १० हजारको नागरिक बचत खाता खोलेको हुनुपर्छ । खाता खोलेपछि १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा तथा २५ हजारसम्मको औषधि उपचार बिमा पाइने बैंकका सहायक प्रबन्धक संगम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
४. सानिमा बैंक
सानिमा बैंकमा बचत खाता हुने सबैले ६ घातक रोगको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि खातावालाको खातामा १ लाख रुपैयाँ अनिवार्य भएको हनुपर्छ । यस्तै बैंकमा दीर्घायु बचत खाता भएकाले वार्षिक ५ हजार स्वास्थ्य परिक्षणका लागि तथा १ लाख स्वास्थ्य सेवा बिमा बापत प्राप्त गर्छन् । यो खाता हुनेले दुर्घटना बिमा बापत २० लाख तथा प्राकृतिक मृत्युमा २५ हजार पाउँछन् । यो खाता खोल्नका लागि न्युनतम मौज्दात १० हजार आवश्यक पर्छ ।
५. बैंक अफ काठमाडौं
यो बैंकले कार्यालय र कम्पनीलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार योजना सञ्चालन गरेको छ । कुनै कार्यालय तथा कम्पनीले २५ वा सोभन्दा बढी कर्मचारीको तलब खाता खोलेमा प्रत्येक खातावालाले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ उपचारका लागि पाउँछन् । यसका लागि सुपर स्यालरी खाता वा प्रिमियम स्यालरी खाता खोलेको हुनुपर्छ । यो खाता १८ देखि ५८ वर्ष उमेरसम्मका मानिसले खोल्न पाउने छन् । यस्तै बैंकमा आत्मीय बचत खाता खोलेका अन्य खातावालाहरुले पनि विभिन्न १५ रोगको उपचारका लागि १ लाखसम्म उपचार शुल्क पाउँछन् । यी दुवै सेवा एक पटक मात्र लिन पाइन्छ । यो खाता अन्तर्गत कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा १ लाख बिमा र १० हजार किरिया खर्च पाइन्छ ।
६. प्रभु बैंक
प्रभु बैंकले वेलकम सेभिङ एकाउन्ट र स्यालरी एकाउन्ट खोलेका सेवाग्राहीहरुका लागि मेडिकल हेल्थ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गरेको छ । दुई पटक गरी अधिकतम १ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइन्छ । बिरामी भएर कम्तिमा २४ घण्टा अस्पताल भर्ना भएका खातावालाहरुले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम उपचारका लागि बैंकको तर्फबाट पाउँछन् । सवारी दुर्घटना भएर खातावालाको मृत्यु भएमा बैंकले अधिकतम १० लाख दिन्छ । तर, हुलदंगा वा अन्य कारणले व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने यो रकम दाबी गर्न पाइँदैन ।
७. एभरेस्ट बैंक
एभरेष्ट बैंकले २५ हजारको प्रिमियम खाता खोलेका सेवाग्राहीका लागि बैंकले औषधि उपचारका लागि १ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । यो वान टाइम सर्भिस हो । बैंकले सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा ५ लाखको बिमा सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ । सबै खातावालाहरुको लागि स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्था गरेको छैन ।
८. हिमालयन बैंक
हिमालयन बैंकले ‘जीवन सुरक्षा बचत खाता’ अन्तर्गत ७ जटिल रोगको उपचारमा अधिकतम १ लाख दिन्छ । एक पटक मात्र दाबी गर्न पाइने यो योजनामा सामेल हुनका लागि आफ्नो खातामा अनिवार्य ७ हजार भएको हुनुपर्छ । यहि खाता अन्तर्गत नै सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा १ लाख पाइन्छ भने अन्य कारणले हुने मृत्युमा ५० हजार रकम पाइन्छ । साथै अन्य सबै खाले बचत खाता हुने सेवाग्राहीहरुले पनि दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा ५ लाख पाउँछन् ।
९. सनराइज बैंक
सनराइज बैंकले बचत खाता खोलेका आफ्ना सबै सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिँदै आएको छ । यस बैंकमा बचत खाता खोलेकाहरुले ३ पटकमा अधिकतम १ लाख रकम उपचारका लागि पाउँछन् । बैंकले सेवाग्राहीलाई आफ्नो खातामा भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम उपचारका लागि दिने व्यवस्था गरेको बैंकका ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट डिभिजन म्यानेजर सुमन थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा पनि बैंकले आफ्ना बचतकर्तालाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ ।
१०. कुमारी बैंक
कुमारी बैंकमा परिवार सुरक्षा बचत खाता खोलेमा १० रोगको उपचारमा अधिकतम १ लाख औषधि उपचार बिमा पाइन्छ । यो खातामा २ बच्चा तथा १८ देखि ६५ वर्षका दम्पत्ती सहभागी हुन पाउँछन् । उपचार बापतको रकम खातामा भएको रकमको ३ गुणा पाइन्छ । साथै घातक रोग लागेमा ५ लाखसम्म पाइन्छ । श्रीमान÷श्रीमतीमध्ये एकको वा दुवैको मृत्यु भएमा वा आजीवन अशक्त भएमा प्रतिव्यक्ति १०÷१० लाख दुर्घटना बिमा पाउने बैंकको डिपोजिट मार्केटिङ डिपार्टको रिलेसनसीप म्यानेजर सुजाता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । साथै २५ जनासम्मको खाता खोलेमा, ७ लाखको दुर्घटना बिमा, १ लाखको मेडिकल बिमा, २ लाखको घातक रोगको उपचार रकम पाइने पनि उनले बताइन् । यो रकमहरु वर्षमा एक पटक मात्र दाबी गर्न पाइन्छ ।
११. सिभिल बैंक
सिभिल बैंकको ‘सम्मान बचत खाता’मा भने अधिकतम ७ लाखको मृत्यु बिमा र १ लाखको उपचार बिमा पाइने बैंकले जनाएको छ । साधारण बचत खाताहरुमा अधिकतम ५ लाखको दुर्घटना बिमा पाइन्छ । बैंकले खातावालाको बैंक खातामा भएको रकमको ४ गुणा रकम प्रदान गर्छ ।
१२. नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक
यो बैंकमा बचत खाता खोलेकाहरुले स्वास्थ्य उपचारका लागि अधिकतम १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । कुनै रोग लागेमा वा दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा यो सेवा लिन सकिन्छ । बैंकको यो सेवा लिन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको २५ दिनभित्र रकमका लागि दाबी गरिसक्नुपर्छ । खाता खोलेको १ वर्ष कटेको सेवाग्राहीले मात्र यो सेवा लिन पाउँछन् ।
अर्किडले माग्यो १० स्टाफ नर्ससहित २९ कर्मचारी
आस्था क्लिनिकले ल्यायो छुट योजना, ल्याबमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
नर्भिकमा स्तन नकाटी क्यान्सरको उपचार
एभरेष्ट अस्पतालले नारी दिवसको दिन नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने
खड्गी इन्स्टिच्युटले मृगौला पत्थरीका बिरामीका लागि नि:शुल्क शल्यक्रिया शिविर गर्दै
स्टार हस्पिटल र नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघबीच बिरामी उपचार सम्बन्धी…